China Hastelloy C-276 UNS N010276 အနားကွပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Sekonic
Hastelloy C276 (W.Nr 2.4819) အနားကွပ်
အနားကွပ်ပစ္စည်း : Hastelloy C-276 (UNS N10276)
Hastelloy ကို C-276 ၎င်းဒြပ်စင်သည်အလွန်နိမ့်ကျသောဆီလီကွန်ကာဗွန်ပါဝင်မှုကြောင့်စိမ်းလန်းသောချေးစားနိုင်စွမ်းရှိသောသတ္တုစပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော tungsten ပါဝင်သောနီကယ် - ခရိုမီယမ် - molybdenum အလွိုင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်စိုစွတ်သောကလိုရင်း (oxidant "chlorides")၊ chloride ဆားဖြေရှင်းချက်၊ sulfuric acid နှင့် oxidating salts အမျိုးမျိုးကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်အပူချိန် Hydrochloric acid တွင်ကောင်းမွန်သောချေးစားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Hastelloy ကို C-276 ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
C Cr နီ Fe မိုး W V Co. , Si Mn P S
.010.01 14.5-16.5 ချိန်ခွင်လျှာ ၄.၀-၇.၀ 15.0-17.0 3.0-4.5 .30.35 ၂.၅ .080.08 ၁.၀ .040.04 .030.03
Hastelloy ကို C-276 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ
သိပ်သည်းဆ (ဂ / စင်တီမီတာ)3) အရည်ပျော်မှတ် (℃) အပူစီးကူး
(W / (m • K) အပူချဲ့ထွင်၏ကိန်း
10-6K-1(၂၀-၁၀၀ ℃) elastic modulus (GPa) မာကျော
(HRC) Operating အပူချိန်
၈.၈၉ 1323-1371 ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၂၀၅.၅ 90 -200 ～ + 400
Hastelloy ကို C-276 အလွိုင်းပုံမှန်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ
တစ်ခု 740 346 67
စာရွက် 796 376 60
ပိုက် 726 313 70
Sekonic သတ္တုများအတွက် Hastelloy C-276 ရရှိနိုင်ထုတ်ကုန်
Hastelloy ကို C-276 ဘား & လှံတံ
အဝိုင်းများ၊ ပြားချပ်ချပ်များ၊အရွယ်အစား ၈.၀ မီလီမီတာမှ ၃၂၀ မီလီမီတာ၊ သော့ခလောက်၊
Hastelloy ကို C-276 ဝါယာကြိုး
Hastelloy ကို C-276 အနားကွပ်
စံချိန်စံညွှန်းအရွယ်အစားနှင့်စိတ်ကြိုက်ပုံဆွဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် precison tolerance ဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်
Hastelloy ကို C-276 စာရွက် & ပန်းကန်
Hastelloy ကို C-276 ချောမွေ့ပြွန် & ဂဟေဆော်ပိုက်
Hastelloy ကို C-276 ချွတ် & ကွိုင်
Hastelloy ကို C-276 စွဲစေ
ဖောက်သည်များ၏ဖော်ပြချက်အရ Hastelloy C-276 သော့ခလောက်၊ ဝက်အူများ၊ အနားကွပ်များနှင့်အခြားရှေ့မီးများပုံစံများဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Hastelloy ကို C-276?
2. သံချေးသည်မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အက်တမ်ချေးခြင်းနှင့်ဖိစီးသောချေးသောအက်ကွဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် ။276 သတ္တုစပ်သည်မီဒီယာဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်းပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုးသောဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်သင့်လျော်သည်။ ၎င်း၏ချေးနိုင်မှုကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ C276 သည်အနည်းငယ်သောပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးစိုစွတ်သောကလိုရင်း၊ ဟိုက်ပိုချလိုရီနှင့်ကလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဖြေရှင်းချက်ချေးများကိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည် ferric chloride နှင့် copper chloride ကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုကလိုရင်းဖြေရှင်းချက်ကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။
Hastelloy C-276 လျှောက်လွှာ：
ဓာတုနှင့်ရေနံဓာတုဗေဒနယ်ပယ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ အော်ဂဲနစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင်ကလိုရိုက်နှင့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းစနစ်များပါ ၀ င်ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်နှင့်အော်ဂဲနစ်အက်ဆစ် (Formic acid နှင့် acetic acid ကဲ့သို့) အရောအနှောများနှင့်ရောနှောသောပင်လယ်ရေအောက်ပတ်ဝန်းကျင် ။
၂။ FGD စနစ်၏အဝတ်လျှော်မျှော်စင်၊ အပူပေးစက်၊ စိုစွတ်သောရေနွေးငွေ့ပန်ကာကိုထပ်မံ။
၃။ အက်ဆစ်ဓာတ်ငွေ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိစက်ပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်ပတ်ခြင်း။
5. ဆာလ်ဖာအက်ဆစ် condenser ။
6. Methylene diphenyl isocyanate (MDI) ။
ရှေ့သို့ အလွိုင်း 31 အနားကွပ်
နောက်တစ်ခု: Incoloy 825 အနားကွပ်
hastelloy က c-276 အနားကွပ်
Hastelloy C276 အနားကွပ်
UNS 10276 အနားကွပ်
Incoloy 028 (UNS N08028) ဘား / စာရွက် / သော့ခတ်
Monel 400 UNS N04400 ဘား / ချောမွေ့သောပြွန် / ဝါယာကြိုးများ ...
ဂြိုလ်တု 6, ဂြိုလ်တု 6B, ဟေး 25 ဝါယာကြိုး, ဂြိုဟ်တုလက်စွပ်, အလွိုင်း R26 မူလီ, ဂဟေဝါယာကြိုး,